Manam-pahaizana momba ny fizahantany sy ny fiarovana azy ireo: tandindomin-doza i Afrika
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Manam-pahaizana momba ny fizahantany sy ny fiarovana azy ireo: tandindomin-doza i Afrika
Birao fizahantany afrikanina • Associations News • Vaovao Mafana • Hospitality Industry • fampiasam-bola • Vaovao • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Africa Wildlife fiarovana sy ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany dia niresaka momba ny ezaka ilaina izay hanampy amin'ny fiarovana ary avy eo hitahiry ny bibidia ao amin'ny kaontinanta, manasongadina ny filàna paikady bebe kokoa hampitsaharana ny heloka bevava amin'ny biby sy ny fanenjehana baroa.
Ny fahaveloman'ny bibidia any Afrika dia zava-dehibe indrindra amin'ny fizahan-tany.
Ny fiantraikan'ny COVID-19 dia nisy fiatraikany ratsy tamin'ny fizahan-tany tany Afrika tamin'ny fotoana izay niezahana hiarovana ny bibidia.
Ny birao fizahantany afrikana dia nanangana webinarina iraisan'ny besinimaro miaraka amin'ny Polar Projects hamahana izany olana lehibe izany.
Amin'ny alàlan'ny webinar ho an'ny daholobe izay niarahan'ny Biraon'ny fizahantany afrikanina (ATB) ary ny Polar Projects ny alahady, ny mpiaro ny fiainana ny fiainana dia sy ny fizahantany avy any Afrika dia naneho ny ahiahiny mafy amin'ny firongatry ny fihantsiana sy ny asa ratsy ataon'ny biby any Afrika.
Nanamarika izy ireo fa ny fahaveloman'ny bibidia any Afrika dia olana iray lehibe atrehin'ireo governemanta afrikanina, ny Fiarahamonina afrikanina, sy ny andrim-panjakana iraisam-pirenena miaro ny bibidia.
Ny talen'ny fizahan-tany afrikanina (ATB) Dr. Taleb Rifai dia nilaza fa harena manokana i Afrika, raha jerena ny harem-pizahantany manan-karena sy ny vahoaka.
Nilaza i Dr. Rifai fa mikendry ny hanao an'i Afrika ho “Hery Iray” i ATB amin'ny fanaovana an'ity kaontinanta ity ho mpizahatany tsara indrindra eran'izao tontolo izao.
Ny vahinin'ny voninahitra sy ny filohan'ny holafitry ny fizahantany afrikanina, Andriamatoa Alain St.Ange, dia nilaza fa ny Afrikanina dia tokony hirehareha amin'ny harena manan-karena ao amin'ny kaontinanta ary ao anatin'izany ny fiainana dia mila miaro ny bibidia.